ကိုရီးယား နှစ်ပြည်ထောင် တင်းမာမှု လျော့လာခြင်းက အမေရိကန်နှင့် နျူကလီးယားအရေး ဆွေးနွေးရန် တ? - Yangon Media Group
ကိုရီးယား နှစ်ပြည်ထောင် တင်းမာမှု လျော့လာခြင်းက အမေရိကန်နှင့် နျူကလီးယားအရေး ဆွေးနွေးရန် တ?
ဆိုးလ်၊ ဇန်နဝါရီ ၂၂
နောက်လတွင်ကျင်းပမည့် ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲမတိုင်မီ ကိုရီးယားနှစ်နိုင်ငံအကြား တင်းမာမှုလျော့ကာ ဆက်ဆံရေးပြေပြစ်မှုဖြစ်ပေါ်လာခြင်းသည် အမေရိကန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့အကြား မြောက်ကိုရီးယား၏ ဒုံးပျံနှင့် နျူကလီးယားအရေးဆွေးနွေးရန် တန်ဖိုးရှိသော အခွင့်အရေးတစ်ရပ်ဖြစ်ကြောင်း တောင်ကိုရီးယားသမ္မတ မွန်ဂျေးအင်က ဇန်နဝါ ရီ ၂၂ ရက်တွင် ပြောကြားလိုက်သည်။
ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်၌ တစ်နှစ်တာတင်းမာမှုများ မြင့်တက်နေ ခဲ့ပြီးနောက် အားကစားသံတမန်ရေးရာအရ နိုင်ငံတကာအိုလံပစ်ကော်မတီက မြောက်ကိုရီးယားအားကစားသမား ၂၂ ဦးကို ဆောင်းရာသီအိုလံပစ်ပွဲတော်သို့ စေလွှတ်မည်ဟု ကြေညာခဲ့သည်။ အိုလံပစ်ပွဲကို ဖေဖော်ဝါရီ ၉ ရက်မှ ၂၅ ရက်အထိ ကျင်းပမည်ဖြစ်သည်။ အိုလံပစ်ပွဲက ဆွေးနွေးပွဲအတွက် တန်ဖိုးရှိသော အခွင့်အရေး ဖြစ်ကြောင်း၊ နျူကလီးယားပြဿနာဖြေရှင်းပေးကာ ကိုရီးယားကျွန်းဆွယ်၌ ငြိမ်းချမ်းရေးတည်ဆောက်သွားရန်ဖြစ်ကြောင်း သမ္မတမွန်က အိမ်ပြာတော်၌ အထက်တန်းအရာရှိများနှင့် အစည်းအဝေးတွင် ပြောကြားလိုက်ခြင်း ဖြစ်သည်။ သို့ရာတွင် မည်သူတစ်ဦးတစ် ယောက်ကမျှ လက်ရှိအခြေအနေသည် ဆွေးနွေးပွဲအတွက် ကြာရှည်ခံမည်ကို အပြုသဘောမမြင်ကြ ကြောင်းမွန်ကပြောကြားလိုက်သည်။
မိမိတို့ကအသိဥာဏ်ရှိရှိ ဆွေး နွေးညှိနှိုင်းမှုအခွင့်အရေးကို ထိန်းသိမ်းထားရမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အိုလံပစ်ပွဲပြီးနောက် နှစ်နိုင်ငံဆွေးနွေးမှုများသည် အမေရိကန်နှင့် မြောက်ကိုရီးယားတို့အကြား ဆွေးနွေးမှုနှင့် အခြားဆွေးနွေးမှုများကို ပေါ် ပေါက်စေမည်ဟု ၎င်းကပြောခဲ့သည်။ လူထုစစ်တမ်းအရ တောင်ကိုရီးယားက အိုလံပစ်ပွဲ၌ မြောက်ကိုရီးယားပါဝင်မှုကို ကြိုဆိုခဲ့ကြသည်။ အိုလံပစ်ပွဲကျင်းပနေစဉ် မြောက်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုအဖွဲ့က ဖျော် ဖြေမှုများ ပြုလုပ်သွားမည်ဟုဆိုသည်။ တောင်ကိုရီးယား ဆိုးလ်မြို့ လယ်ရထားဘူတာ၌ မြောက်ကိုရီးယားကိုယ်စားလှယ်များ ရထားမဆိုက်ရောက်မီ လူတစ်ဦးက ကင်ဂျုံအန်၏ ရုပ်ပုံအား မီးရှို့ဆန္ဒပြခဲ့သည်ကို ရဲကဟန့်တားလိုက်ရသည်ဟုဆိုသည်။
ဘင်္ဂါလီများ ပြန်ပို့မည့်ရက် ဘင်္ဂလားဒေ့ရ်ှနိုင်ငံမှ ရွှေ့ဆိုင်းဟု ရိုက်တာ သတင်းဖော်ပြ၊ မြန်မာ
ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် အာဘေး ဖွဲ့စည်းပုံပြင်ရန် အချိန် ကန့်သတ်မှုကို ရှောင်
မန္တလေးတွင် တရားမဝင် အလုံပိတ်တဲ ဖွင့်လှစ်သူကိုးဦးကို အလုပ်နှင့်ထောင်ဒဏ် ခြောက်လစီ ကျခံစေရ
ပျောက်ဆုံး ကျပ် ၅ဝဝ တန် အောင်ဘာလေထီစောင်ရေ ၁၄ဝဝဝ ကျော်မှ ထီဆုများ ထွက်ရှိပါက အစားထိုးပြန်လည
လာမည့် ပညာသင်နှစ်တွင် ကျင့်သုံးမည့် တက္ကသိုလ်ဝင်တန်း စာမေးပွဲ မေးခွန်းပုံစံ အသစ်ကို မေ ၂ ရက်
သီတင်းကျွတ် လပြည့်နေ့ ဆွမ်း ပန်း ရေချမ်း ဆီမီး ကပ်လှူရေး စစ်ကိုင်းကောင်းမှုတော် ဘုရားဂေါပကအ?
ရခိုင်ပြည်နယ်ကို လှူဒါန်းမည့် စစ်ကိုင်း ဂီတဖျော်ဖြေပွဲနှင့် ချစ်ကြည်ရေးဘောလုံးပွဲမှ အလှူ?